Guddoomiyaha DPFZA Jabuuti: Danta DP World waa in ay Jebel Cali badbaadiso – Radio Daljir
Guddoomiyaha DPFZA Jabuuti: Danta DP World waa in ay Jebel Cali badbaadiso
Maarso 18, 2018 8:00 g 0
Dowladda Jabuuti ayaa falkii Itoobiya ay kula shirkoowdey shirkadda DP World waxa ay ku tilmaantey khayaano ay Itoobiya ku taageertay dowladda Imaaraatka Carabta iyo shirkadda DP World.
Warkaas kabacdi ayaa dowladda Itoobiya waxaa la filayayey in shalay oo aheyd Sabti ay wafdi heer sare ah oo uu hoggaaminayo Worqneh Gebeyehu (PhD), Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Itoobiya, uu u ambabaxo Jabuuti, si uu ula kulmo dowladda Jabuuti uga dhaadhiciyo in arrinku uusan aheyn sida la moodey.
Sida ay shaaacisey shirkadda DP World, waxa ay DP World iyo Itoobiya saami dhan 70% ku yeesheen Dekedda Berbera, meesha Somaliland ay yeelatey 30%.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Itoobiya ayaa hore u shaacisey in Dekedda Berbera ay muhiimad gaar ah u leedahay danaha Itoobiya, laakiin wararka hadda isa soo taraya ee ka soobaxaya Jabuuti ayaa arrinkaas labadii maalmood ee la soo dhaafey cirka ku sii shareerey, ayada oo dowladda Jabuuti ay heshiiska ku tilmaantey khayaano lala beegtay Jabuuti.
Sidoo kale, Baarlamaanka Soomaaliya ayaa heshiiska DP World ka dhigey waxbakamajiraan, shirkadda DP World ayana ka mamnuucey dhammaan hawlaha ay ka waddo Soomaaliya.
Sidoo kale Dowladda Jabuuti ayaa DP World dalka ka mamnuucday, kalana wareegtey Dekedda Dooraleh oo DP World ay maamulaysay tan iyo sannadkii 2006, laheydna 33%.
Abuubakar Haadi oo ah Guddoomiyaha ‘firii soonka’ DPFZA Jabuuti, ahna xeeldheere hawlaha badaha oo la hadlay wargeysaka Addis Fortune ayaa heshiiska Dekedda Doraaleh ee ay dowladda Jabuuti burisey bishii hore waxa uu heshiiskaas DP World ku tilmaamey mid lid ku ah qaranimadii dalka, diidayana in Jabuuti ay dhisato deked kale oo aan ka aheyn tan DP World ay maamuleysey ee Dooraaleh.
Sidoo kale heshiiska DP World ee Dekedaha Berbera iyo kan Bossaso, qaybaha heshiiska ee illaa iyo hadda la soo bandhigey, ayaa asna si toos waxa uu u diidayaa in Somaliland iyo Puntland aysan dhisan karin deked kale oo DP World aysan raalli ka aheyn.
Dekedda Dooraaleh oo qorshihiisa heshiis ee DP World uu markiisii hore ahaa in la ballaariyo dekedda si ay ula tartanto dekedaha kale ee jaarka la ah, kana dhigto Dekedda Dooraaleh xarunta qaybinta xammuulka u socda dekedo kale (hub for transshipment), lana tartami karta dekedaha Cadan (Yeman), Jiddah (Sacuudi Carabiya), Salaalah (Commaan), iyo Jabal Cali (Imaaraadka), oo dhammaantood ay maamusho DP World.
Abuubakar oo sharraxaya sababta Jabuuti ay heshiiska u burisey ayaa yiri, “heshiiskii DP World iyo Jabuuti waxba kama uu hirgelin, maxaa yeelay DP World waxa ay dhammaan xammuulkii u leexisey Jiddah iyo Jabal Celi. Sababta ay heshiiska Dooraaleh noola gasheyna markiisii hore sida muuqata waxa uu ahaa si ay Jabuuti u noqoto goob aan nuuxsan karin, xammuulka wax-ku-ool ka ahna mar kasta loo leexiyo Jabal Cali iyo hoyga DP World.”
Abuukar Haadi ayaa yiri, “waxa loo dagaalamayaa waa xammuulka u socda dekedo kale, kaasna DP World cid kale uma oggola aan ka aheyn Jabal Cali.”
Siyaasadda & Dhaqaalaha 478 Wararka 20327